Mo Ibrahim Foundation wuxuu difaacayaa xigeenka caadiga ah ee socdaalka Afrikaanka - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Mo Ibrahim Foundation wuxuu la dagaallamaa khaldan la'aanta ku saabsan guuritaanka Afrika - JeuneAfrique.com
Warbixintii ugu dambeysay ee aasaaska, oo loogu talagalay dhalinyarada Afrikaanka ah iyo cinwaankeedu yahay "Socdaalka shaqo la'aanta? Wuxuu fiiriyaa qaab cusub oo xajmiga iyo sababaha astaankani.
"Warbixinteenu waxay muujineysaa in aragtida muhaajiriinta Afrika ay ka haysato caqabado badan. Wixii furitaan ah ee ay forum, Mo Ibrahim Weekend, Saturday 6 Abriil Abidjan, bilyaneerka Anglo-Sudanese kaasoo sameeyey maal ah ee isgaadhsiinta ayaa isla markiiba cambaareeyey farqiga u joogto jira maanta oo u dhexeeya xaqiiqada dhabta ah ee socdaalka iyo matalaad in la sameeyo, gaar ahaan warbaahinta Northern.
Haddii hal nambar loo baahan yahay si loo muujiyo isbeddelkan? 2018, afrikaanku waxay matalaan 14,1% kaliya ee ka mid ah dadka soo galootiga ah ee adduunka. Ka dambaysa Aasiya (41%) ama xitaa Europe (23,7%). Masar, tusaale ahaan, bixiyaha ugu weyn ee Afrika ee muhaajiriinta ah ee u soo guuray Morocco iyo Soomaaliya, laakiin kaliya 19e meesha kaalinta. Mexico waxay u dhigantaa tirada ugu badan ee dadka soo galootiga ah ee dunida ku nool ee leh 5%, ka hor Russia (4,1%) iyo China (3,9%).
Si ka fiican, in ka badan 70% soogalootiga Afrika ayaa dooranaya in ay ku noolaadaan wadan kale oo qaaradda ka mid ah. Afrika, oo kale, ayaa lafteeda heleysaa saamiga koraya ee dadka adduunka ee muhaajiriinta (+ 67% tan iyo 2000). Falastiin (452 000) noqonaya saamiga ugu weyn ee soo galootiga aan Afrika in qaarada ka hor Faransiis ah (253 000) iyo Suuriya (210 000). Faransiiska ayaa ku soo laabtay waddanka martida loo yahay ee marti gelinta Afrika (3,8 million).
>>> READ: Infogaan: dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato dadka soo galaya gudaha Afrika
Laakiin aragtida dhacdooyinkan woqooyiga waa mid aad uga fog tirooyinka. "Qaar ka mid ah wadamada martida loo yahay, warbixintu waxay sheegaysaa, aragtida soogalootigu badanaa waa dareen badan oo ku salaysan khalad ah. Tirada dhabta ah ee muhaajiriinta ayaa sida caadiga ah ay ku badan tahay "sadex ilaa afar jeer" marka loo eego xaqiiqda. Xaalad gaar ah oo muhiimad gaar ah leh ee Yurub, waa qaar keli ah oo dadweynuhu u arkaan haajirid ah khatar.
preconception kale oo hoos by statistics ay ururiyeen Foundation, Afrika waxaa ugu horayn ma-gasha sababo ammaan, ilaa hadda waxa ka: "Ku dhawaad ​​80% muhaajiriin Afrikaan ah maxaabiis ahaan in rajada horumarinta xaaladaha dhaqaale iyo bulsheed. "
Diirada saar dhaqdhaqaaqa iyo raasamaalka aadanaha
Arrin la xidhiidha joojinta maadaama ay dadku si degdeg ah u koraan iyada oo aan qaar badani u muuqan inay awood u leeyihiin in ay siiyaan shaqooyin ku filan shaqooyinka jiilasha cusub. In ka hooseysa Sahara Afrika, 3 million shaqooyin cusub ayaa la abuuraa sannad kasta markii ay qaadan lahayd 18 million si ay u soo jiito dhalinyarada ku sugan suuqa shaqada.
Si loo xaliyo isla'egtan, Mo Ibrahim Foundation wuxuu soo jeedinayaa dhowr shaqo oo kala duwan, sida "xoojinta dhaqdhaqaaqa juqraafi" iyo "kordhinta caasimada".
Maareynta macaamil fiican ayaa dhab ahaantii yarayn doonta waxqabadka shabakadaha dambiyada iyo garsoorka hubka ee hubaysan ee hubeysan iyada oo bixinaya qaab sharci ah oo ka tarjumaya isdhexgalka dhaqaale ee dadka.
Dadaallada lagu sameeyo fiisooyinka
Heshiiska Caalamiga ee Socdaalka oo la ansixiyay bishii December ee 2018 ee Marrakech ayaa sidoo kale amaanay warbixinta "heshiiskii ugu horeeyay ee dawladeed ee ujeedkiisu yahay in lagu daboolo dhammaan cabbiraadda socdaalka caalamiga ah ee ku dhisan qaab guud oo dhamaystiran". Afrika mar hore waxay leedahay dadaal weyn oo lagu sameeyo markaan ogaanno in muwaadin African ah uu u baahan yahay fiiso si uu ugu tago ku dhawaad ​​kala badh dalalka qaaradda. "
>>> READ: Khariidadaha: arrimaha ku saabsan fiisooyinka, dalkaaga miyuu furanyahay ama la xirayaa?
In mid ka mid ah dhacdooyinka ugu filayay ee isbuucaan, madax-ilaa-madaxa galabta u dhexeeya Mo Ibrahim oo Aliko Dangote hoolka dhanyahay ee Ivoire Hotel, Nigeria, nin kadis ah ugu taajirsan Africa, dhammaataan lagu muujiyey this: "Waad ogtahay, Anigu waxaan haystaa caawiye ah oo aan Afrika oo i socda in kasta oo shirarka aan dibadda uga qaadan karaysid, ayuu u sheegay . Inta badan, marka aan u safrno Afrika, waa la ogol yahay in uu tago isagoo aan rasmi ahayn markaan buuxiyo foomamka fiisaha. Anecdote ah oo aan ku guuldareysneyn inuu kiciyo qosolka dhagaystayaasha.
Si kastaba ha noqotee, warbixinta hay'adda samofalka ah waxay soo saareysaa horumar weyn oo ku saabsan arrintan. Sida laga soo xigtay isaga, "tan iyo 2017, waddamada 37 Afrika waxay hagaajiyeen furfurnimadooda marka loo eego fiisooyinka." Tusaalaha ugu muhiimsan waa Itoobiya, oo ku dhawaaqday 2018 go'aankeeda ah inay ku fashilanto fiisooyinka dhammaan muwaadiniinta Afrikaanka ah.
Marka laga eego hagaajinta caasimadda, Mo Ibrahim Foundation wuxuu ku talinayaa in dawladu ay diiradda saarto saddex siyaabood oo laga barto: helitaanka xirfadaha ee farsamooyinka casriga cusub ee 4e kacaankii warshadaha, tababarka xagga shaqada oo aan beddeli karin robot iyo tababar soconaya.
More maverick iyo ka yar siyaasad ahaan sax ahayn kooxdiisa, Mo Ibrahim, oo uu hadal hordhac ah, ayaa Dhanka kale kiciyey su'aasha ah in uusan ka muuqan warbixinta, "su'aalo ah ee qaar ka mid ah la raacayo Afrika, sida tirada carruurta ee dumarka. ". "Haddii aad sameysid carruurta 7 ama 8," ayuu yiri, "inta badan waxay iskuulku aadi doonaan iyo inta ay ka baxayaan Boko Haram?" "
Shil gaareen ayaa keena dhimashada 20 qof